Ukhathalelo lweMveliso- Popular Jewelry
Ngenxa yokuba zonke iintsimbi zobucwebecwecwe zithambile kwaye zinokuthambiseka, kulandela ukuba iimpahla zegolide nezesilivere kufuneka zinxitywe kwaye ziphathwe ngononophelo olukhulu. Oku ikakhulu kunjalo ngamacwecwe amancinci, alula ezinto ezenziwe ngobucwebe, anokuchaphazeleka ngakumbi ukuba alwe ngaphezu koogxa babo abanzima. Ubucwebe obucocekileyo kufuneka bususwe emzimbeni ngaphambi kokwenza umsebenzi onzima (njengomsebenzi wokwakha okanye ukunxibelelana nemidlalo) njengoko zinokubambelela kwizinto zangaphandle kwaye zikrazule. Amanqaku afanelekileyo ezinto zokuhombisa kufuneka asuswe ngaphambi kokuvasa njengoko iikhemikhali ezinobungozi ngaphakathi kweeshampu kunye nokuhlamba kungonakalisa okanye konakalise ubucwebe.
Kucetyiswa kakhulu ukuba ubucwebe besilivere, xa bungasetyenziswa, bugcinwe ngaphakathi kwengxowa engenanto okanye isikhongozeli. Oku kukhusela isilivere ekuphenduleni ngemichiza ngemeko yokusingqongileyo (njengomoya otyebileyo weoksijini; ulusu olune-asidi) enokuthi ibangele ukuba isilivere ingcolise kwaye ilahle ubumhlophe bayo bendalo.
Ukutshiza iziqwenga zesilivere esele zilungisiwe zingabuyiselwa kwisimo sazo santlandlolo ngokukhawuleza ngezisombululo zokucoca iikhemikhali, ezifana leyo sinikezela. Ukuhlamba okukhawulezayo kwamashumi amabini anesibini kwisicoceko kuya kususa umaleko wethoni kunye nobumdaka kwisilivere.
Izisombululo ezizezinye zekhaya zokususa i-tarnish buildup ziyafumaneka, nangona zingalunge. Iziqwenga zesilivere ezinobuthathaka zingabekwa kwisisombululo samanzi sokubhaka isoda kunye ne-aluminium foil kwaye siziswe kwithumba; ubucwebe kufuneka buphucuke ngombala kwimizuzu embalwa.
Ubucwebe begolide bunokunxitywa xa uhlamba lo gama nje ungasebenzisi naluphi na uhlobo lweekhemikhali ezinobunzima kuhlamba lwakho. Kulumkele ukusebenzisa ubucwebe begolide echibini kuba i chlorine inokonakalisa ialloy yegolide.